Abenzi base China STEVIOSIN kunye nabathengisi | HEX
IStevioside (CNS: 19.008; INS: 960), ekwabizwa ngokuba yiStevioside, yiglycoside ekhutshwe kumagqabi kaStevia Rebaudia (Stevia), usapho lwezityalo kusapho oludibeneyo.
I-stevia iswekile ye-calorific value yi-1/300 ye-sucrose, engafakwanga emva kokutya komzimba womntu, ayivelisi ubushushu, ilungele abantu abaneswekile kunye nezigulana ezityebe kakhulu. Xa uStevia exutywe ne-sucrose fructose okanye iswekile eyenziwe ngomzimba, ubumnandi bayo kunye nencasa yazo zinokuphuculwa. Ingasetyenziselwa iilekese, iikeyiki, iziselo, iziselo eziqinileyo, ukutya okutyiweyo, iziqholo, iziqhamo eziswiti. Sebenzisa ngokumodareyitha ngokweemfuno zemveliso. Musa ukufunxwa emva kokutya, musa ukuvelisa amandla obushushu, ngenxa yeswekile, izigulana ezityebileyo zilungile.
Njengowona mveliso uphambili weStevia rebaudiana, i-steviol glycosides inexabiso elityebileyo kwezonyango kunye nokutya, kwaye ukhuseleko lwabo luye lwavavanywa lwaqinisekiswa yimibutho yezobugcisa yamanye amazwe.
Ukhuseleko olutyiwayo lwe-steviol glycosides luye lwadlula kuphononongo loontanga olungqongqo. Yonke imibutho yolawulo lwamazwe aphesheya ijonga i-stevia njengemveliso yokutya ekhuselekileyo. Le mibutho ibandakanya: IKomiti yeKhowudi yokutya (i-CAC), uMbutho weZizwe eziManyeneyo woKutya kunye nezoLimo / iKomiti yeZiko eliDibeneyo yezeMpilo kwiZongezo zokutya (i-JECFA), iArhente yoKhuseleko loKutya yaseYurophu (i-EFSA), i-US Food and Drug Administration (FDA) kunye neNew Zealand IQumrhu loLawulo lweMigangatho yokutya (FSANZ).
UStevia siswiti esithandwa ngabantu abaninzi. Kwakhona imifuno engapheliyo kwimida phakathi kweParaguay neBrazil eMzantsi Melika. Amagqabi e-stevia aqulathe into eswiti ebizwa ngokuba yi "Stevia". I-stevia esulungekileyo yikristale engenambala kwaye engenancasa. Inencasa emalunga namawaka angama-300 eswekile. Ngenxa yekhalori esezantsi, enyibilikayo ngokulula emanzini okanye etywaleni, kunye nobushushu obunganyangekiyo, inokuchazwa njengemveliso engena khalori endaweni yeswekile kwaye siswiti esisetyenziselwa ukutya kweswekile okanye ukutya okunciphisayo. UStevia ubizwa ngokuba ngu "Kahei" (Gulani, okuthetha ukuthi "ingca emnandi") eParaguay, kwaye isetyenziselwa ukongeza ubumnandi kwi-yerba mate.
Egqithileyo White Willow Caphula Powder
Okulandelayo: YaseSiberia Ginseng Caphula Powder
Rhodiola Rosea Caphula Powder